कोभिड–१९ सम्बन्धमा प्रदेश ५ को अवस्था – इन्सेक
बाँके ०७६ चैत २१ गते
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न र स्थानीय तहहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । प्रदेशका लकडाउनको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । बाँके जिल्लास्थित नेपाल भारत सिमा नाकामा अलपत्र अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई नेपाली सेनाले दशगजा क्षेत्रमा तयार गरेको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
बुटवलको धागो कारखानामा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका बाबुराम थापाको शव पाँच दिन बितिसक्दा पनि आफन्तले बुझ्न मानेका छैनन् । अस्पतालको आइसोलेशनमा चैत १६ गते उपचारका क्रममा मृत्यु भएका बाबुराम थापाको शव अस्पतालको शव गृहमा राखिएको छ ।
पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमिल्सिनाका अनुसार निजि अस्पतालले ज्वरोका बिरामीलाई चेकजाँचबीना घर फर्काउने गरेको छ । चैत ९ गते भारतबाट घर फर्केका बगनासकाली गाउँपालिका – २ पोखराथोकका २० बर्षीय दामोदर कुमाल र उनीसँगै आएका २१ वर्षीय सन्तोष कुमाललाई कोरोना सङ्क्रमणको आशङ्मा जिल्ला अस्पतालको आइसोलेशनमा राखेर उपचार थालिएको छ । कुमाल ज्वरो र सुख्खा खोकी लागेपछि चैत १५ गते लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभासमा उपचारकालागि गएका थिए । अस्पतालले उपचार नगरि सामान्य औषधि दिएर एम्बुलेन्सबाटै घर फर्काएपछि होम क्वारेनटाइनमा बस्दै आएका थिए । उनीसँगै आएका सन्तोषलाई समेत समस्या देखिएपछि जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्टेन्डेन्ड डा. पुष्पराज ज्ञवाली सहितको टोलीले घरमै पुगेर जिल्ला अस्पतालमा रेफर गरेको छ ।
जिल्लाको ठूलो नीजि अस्पताल लुम्बिनी मेडिकल कलेजले उच्च ज्वरोका बिरामीहरूलाई उपचार नगरि घर फर्काएको बिरामीहरुले गुनासो गरेका छन् । चैत २० गते उच्च ज्वरो आएपछि उपचारका लागि लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा पुगेका माथागढी–४ झडेवाका २० वर्षीय बिष्णु सारुलाई उपचार नगरि घर फर्काएको बिष्णुले बताउनु भयो ।
कलेजका निर्देशक डा. राजु शाक्यले उनको अवस्था सामान्य रहेकोले घर पठाइएको बताउनु भयो । पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव सुवेदी सहितको सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले चैत २१ गते मेडिकल कलेजमा पुगेर कलेजसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा अघिल्ला दिनको जस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता कलेजले जनाएको प्रजिअ सुवेदीले बताउनु भयो ।
रूपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रिमा बिसीका अनुसार बुटवल उपमनपास्थित साविक धागो कारखानामा स्थापना गरिएको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा हालसम्म २५ जना कोरोनाका शङ्कास्पद बिरामीहरू भर्ना भएकोमा २३ जनाको रिपोर्ट नगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको छ भने एकजनालाई विशेष अस्पतालको आइशोलेशनमा भर्ना गरिएको छ । एक जनाको उपचारको क्रममा चैत १६ गते मृत्यु भएको थियो ।
मृत्यु भएका बाबुराम थापाको शव पाँच दिन बितिसक्दा पनि आफन्तले बुझ्न मानेका छैनन् । कोरोनाको आशङ्कामा भर्ना भएका थापाको मृत्यु पश्चात् आएको रिपोर्टमा कोरोना भाइरस नेगेटिभ देखिएपछि आफन्तले अस्पतालले उपचारमा लापरवाही गरेको बताउँदै आएका छन् । मृत्युको यथार्थ रिपोर्ट अस्पतालले दिनुपर्ने र क्षतिपुर्तिसमेत सरकारले दिनुपर्ने माग राख्दै परिवारले बाबुरामको शव बुझेका छैनन् ।
पाल्पा रिब्दिकोट गाउँपालिका–६ मा स्थायी घर भएका थापाको परिवार सैनामैना नगरपालिका –४ सिसौडाँडामा भाडामा बस्दै आएका छन् । चैत ६ गते दुबईबाट नेपाल आएका उनलाई ज्वरो र कोरोनाको जस्तो लक्षण देखिएको भन्दै अस्पतालले आइसोलेशनमा राखेको थियो ।
थ्रुट स्वाव परीक्षणकालागि काठमाण्डौ पठाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सहयोगमा भैरहवाको राष्ट्रिय गहुँबाँली अनुसन्धान केन्द्रको परिसरमा प्रयोशाला बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख डा.राजेन्द्र कुमार गिरीले बताउनु भयो । गिरीले प्रदेशस्तरको प्रयोगशालाले प्रदेशमा रहेका प्रयोगशाला कर्मीहरुलाई कोरोना भाइरसको नमूना सङ्कलन, भण्डारण र बायोसेप्टी (जैविक सुरक्षा) सम्बन्धी ४७ जनालाई तालिम दिइसकेको र यसको निरन्तरतामा जोड दिएको बताउनु भयो ।
गुल्मी जिल्ला प्रतिनिधि टोपलाल अर्यालका अनुसार जिल्लामा लक डाउन थप व्यवस्थित गर्दै लगिएको छ । अहिले स्थानीय तहहरूले आफ्नोे क्षेत्र भित्रको व्यावस्थापन आफै गर्न थालेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि चैत १८ गतेदेखि सवारी पासलाई कडाई गरेको छ । केही स्थानीय तहहरूमा अझै पनि स्वदेश तथा बिदेशबाट नागरिकहरू आउने क्रम रोकिएको छैन । चैत २० गते मदाने गाउँपालिकामा भारतबाट आएका आठ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । सदरमुकाम तम्घासमा रेसुङ्गा नगरपालिकाले २० वेडको आइसोलेशन कक्ष सञ्चालन गरेर चैत २० गतेबाट ज्वरो तथा रुघाखोकी लागेका बिरामीहरूलाई उपचार गर्न थालेको छ । जिल्लामा ४२ जना एम्बुलेन्स चालक त्रासमा काम गर्न बाध्य भएका छन् । जिल्लाले पीपीइ वितरण गर्न नसकेका कारण काम गर्न मुस्किल परेको एम्बुलेन्स चालकहरूको गुनासो रहेको छ ।
बर्दिया जिल्ला प्रतिनिधि मानबहादुर चौधरीका अनुसार जिल्लाको लकडाउनको पुर्ण पालना भएको छ ।
हालसम्म जिल्ला भरी स्थानीय सरकारले तयार गरेका २७ ओटा क्वारेन्टाइनमा ४ सय ८८ बेड रहेको छ । भारत र नेपालकै विभिन्न जिल्लाबाट घर फर्केका ३१ जना महिला र ३ सय ४३ जना गरी ३ सय ७४ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । जिल्लामा तीन जनाको स्वाव परीक्षण गर्न पठाएकोमा तीनै जनाको रिर्पाेट नेगेटिभ आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले बताउनु भयो ।
सबै स्थानीय तहले मास्क उत्पादन गरेर अति गरिब, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै गएर वितरण गर्नुको साथै स्वास्थ्य जाँच गरेका छन् । स्थानीय तहले विदेश, बाहिर जिल्लाबाट घर फर्केका ब्यक्तिहरुको खोजी गर्न स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि र प्रहरीको टोली बनाएर परिचालन गरेको छ ।
लकडाउनका कारण विपन्न र सिमान्तकृत समूदायमा दैनिक छाक टार्न कठिनाइ भएका ब्यक्ति र परिवारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य सबै स्थानीय तहले सुरू गरेको छ । बढैयाताल पालिका राहत सामाग्री वितरण गरेको छ । भारतसँग सबै भन्दा बढि खुल्ला सिमा रहेको भएपनि मुख्य नाका छैन्न । साना नाका भएको र भारतसंगको समन्वयमा पुर्ण रुपमा दुवै तर्फबाट बन्द गरिएकाले मानिसहरुको आवातजावत बन्द रहेको छ ।
प्यूठान जिल्ला प्रतिनिधि रविन्द्र पाण्डेका अनुसार लक डाउनको समय भएपनि गहुँ बाली भित्रायाउने समय भएकोले घर परिवार र थौरै मानिसको उपस्थितिमा गहुँ काटने भित्राउने काम भइरहेको छ । जिल्लाका सबै स्थानिय तहले स्वास्थ्य स्यमसेविका मार्फत कोरारेना भाइरस सम्बन्धी प्रत्येक वडामा जन चेतना सञ्चालन गरेको र जनप्रतिनिधिहरूले बस्तीहरूमा माक्स तथा साबुनहरू वितरण गर्ने र त्यसको प्रयोग बारे जानकारी दिंदै आएका छन् । दैनिक उपभोग्य साम्रगी अभाव हुन नदिनकालागि सबै स्थानिय तहले प्रत्येक वडाहरूमा वडा अध्यक्षको अगुवाइमा राहत वितरणको लागि घर परिवार पहिचान गरी लगत सङ्कलन कार्य भइरहेको छ ।
अर्घाखाँची जिल्ला प्रतिनिधि नारायण भुसालका अनुसार भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट अर्घाखाँची प्रवेश गर्ने नागरिकको स्वास्थ परीक्षण गर्ने उदेश्यले स्थापन गरिएका १२ वटा हेल्थ डेक्समा माक्स तथा स्यानीटाइजर समेत अभाव भएको छ । मालारनी गाउँपालिकामा १ देखि ९ वडा सम्म चैत २१ गते किटनासक औषधि छर्किएको छ । मालारानी गाउँपालिका–३ का बिराी मिनराज खनाल लाई नेपाल भारतको सुनौली नाकामा अलपत्र रहेको अवस्थामा गाउँपालिकाको पहलमा उद्धार गरी ल्याइएको र क्वारेन्टाइनमा राखिएको अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्यले बबताउनु भयो । पाणिनी गाउँपालिकामा कोरोना राहात कोषको स्थापना गरी २५ लाख रूपियाँ बिनियोज गरिएको उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतमले जानकारी दिइन ।
बाँके जिल्ला प्रतिनिधि स्मृति देवकोटाका अनुसार भारतबाट नेपाल आउने क्रममा सिमा नाकामा चैत १६ गतेदेखि अलपत्र परेका १ सय ८१ जनालाई दशगजा क्षेत्रमा नेपाली सेनाले तयार गरेको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।